‘ह्याप्पि बर्थ डे’मा वृक्षरोपण गराँै - Digital Khabar
२५ असाेज, काठमाडौँ । ‘ह्याप्पि बर्थ डे’ कसरी मनाउँने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? केक काटेर अथवा अन्य सिर्जनशील कार्य गरेर । वृक्षरोपण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने प्रकृति संरक्षण अभियानका अभियन्ता अनिल बस्न्यातलाई सम्झनुहोला । तपाईँलाई ‘सेलिब्रेसन’ दिन उहाँ निः शुल्क बिरुवा लिएर तपाईँ रहेकै स्थानमा आउनुहुन्छ । वृक्षरोपणमा सहयोग गर्नुहुन्छ ।
किशोरावस्थादेखि वृक्षरोपणमा सक्रिय उहाँले हालसम्म चारहजार भन्दा वढी वृक्षरोपण गरिसक्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो “ म खाली सार्वजानिक जमीन खोजी खोजी वृक्षरोपण गरिहाल्छु । निजी जग्गा धनीलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइदिनुस भनी अनुरोध समेत गर्दछु ।”
कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिका–३, का अभियन्ता बस्न्यातले आफ्नी आमा देबीरानी बस्न्यात र मामा हिक्मतबहादुर बिष्टको प्रेरणाबाट प्रकृति संरक्षणमा अघि बढेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “प्रकृतिलाई कसरी माया गर्नुपर्छ, बोट विरुवा कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ र वृक्षारोपणको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले मेरी आमाबाट सिकेको हुँ । आमा असाध्यै प्रकृतिप्रेमी हुनुहुन्थ्यो । ”
सन् १९७५ देखि वृक्षरोपणमा सक्रिय उहाँले भन्नुभयो “केही वर्ष अध्ययनका सिलसिलामा वृक्षरोपण गर्न सकिन । पछिल्ला सयम निरन्तर वृक्षरोपणमा सक्रिय छु । जागिरे जीवनका क्रममा म जुन जिल्ला पुगेँ, त्यहाँ वृक्षरोपण अभियान सुरुआत गरिहाले । सार्वजानिक जमीन, उद्यान तथा आम सर्वसाधारणलाई वृक्षरोपण अभियानमा सरिक गराउँदै वृक्षरोपण गरेँ । ”
नेपाल परिवार नियोजन सङघमा कार्यरत अभियान्ता बस्न्यातको अभियानलाई पछिल्लो समय विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) नेपाले सितको साझेदारी र फिनल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित जनसंख्या स्वास्थ्य तथा वातावरण परियोजनाले थप ऊर्जा थपिदिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो “ बिरुवा रोपणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र यस पवित्र अभियानमा आफ्ना साथीका साथै विश्वव्यापी कसरी चिरपरचित गराउने र अभियालाई कसरी विश्वव्यापी समेत बनाउने भनी सोंचिरहन्थे । उही सोचका बीचमा एउटा सजिलो उपाय निस्कियो –सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा ग्रुप बनाउने । ”
विश्वमा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सचेतीकरणका नयाँ नयाँ र अनौठा अनौठा अभियान सञ्चालित छन भने यसै सञ्जाल भित्रको एउटा शसक्त माध्यम फेसबुकलाई अभियन्ता बस्न्यातले प्रयोगमा ल्याउनुभएको छ । “ यसपछि ‘प्रकृति संरक्षण अभियान नेपाल’ ९ल्बतगचभ ऋयलकभचखबतष्यल ऋबचबखबल ल्भउब०ि नामको फेसबुक ग्रुप बनाए । उक्त ग्रुप मार्फत आफ्ना जन्मदिनमा एउटा बिरुवा अवश्य रोप्नुहोस भनी सबैलाई आग्रह गर्न थालेँ ”, उहाँले भन्नुभयो “फेसबुक पेज ग्रुपबाट मेरो अभियानलाई धेरै साथ एवं हौसला मिल्न थाल्यो । ग्रुपमा स्वदेशबाट मात्रै हैन बिदेशबाट पनि शुभेच्छुक जोडिन थाल्नुभयो । ”अहिले उक्त फेसबुक पेजमा ६००० बढी व्यक्ति जोडिइएसकेका छन् । यसै क्रममा अभियानलाई अँझ बढी तीब्रता दिन अभियन्ता बस्न्यातले पछिल्लो समय ‘आफ्नो जन्मदिनमा एउटा बिरुवा रोप्नुहोस , बिरुवा रोप्दै गरेको फोटो फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस र निशुल्क प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस’ भनी अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो“यसबाट उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भयो । हालसम्म करिव २०० जनालाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएका गराइसकेको छु ।
अभियन्ता बस्न्यात स्वयं आफ्नो तथा आफ्ना परिवारका सदस्यका जन्मदिनमा बिरुवा रोप्ने गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नभयो“ वृक्षरोपण गर्ने मेरो अभियानमा घरका सदस्यले औधी नै सघाएका छन् । सुरु सुरुमा त परिवारका सदस्य एवं समुदायलाई अभियानका बारेमा बुझाउन समस्या प¥यो । ” पछिल्लो समय उहाँको सो अभियानलाई नेपालगन्ज निवासी हेमन्तराज काफ्लेले हौसला प्रदान गरिरहनुभएको छ । उहाँ ‘एट बिलियन ट्रि’ का अभियन्ताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
अभियन्ता बस्न्यातले भन्नुभयो “ म कही कतै सार्वजनिक जग्गा देखे वा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा बिरुवा रोपण गरिदिन आग्रह गर्छन भने निःशुल्क बिरुवा लिएर पुगिहाल्छु । उहाँहरुले इच्छा गरेकै बिरुवा रोपिदिन्छु । आफ्नै पैसाले बिरुवा खरीद गर्छु । साथीलाई पनि जन्मदिनमा बिरुवा खरीद गरि उपहार दिन्छु । उनीहरुले रोपिदिन सहयोग पनि गर्छु । ”
नेपालगञ्ज हुँदै हाल काठमाडौलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर बसेका अभियन्ता बस्न्यात वृक्षरोपणका लागि जमिन अभाव हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “ बिरुवा उमार्ने काम गर्न धौ धौ छ । नर्सरीमा बिरुवा खरीद गर्दा निकै महंगो पर्छ । यसो भनिरहँदा अभियान रोकिँदैन । म बाँचुञ्जेल वृक्षरोपण अभियान जारी राख्छु ।
बिरुवा किन रोप्नुपर्छ, यसबाट के कस्ता फाइदा छन र यसको महत्व प्रायः सबैलाई थाहा छ तसर्थ यसबारे समय खर्चिनु पर्दैन ।” उहाँले प्रकृति संरक्षण अभियान नेपालको लिंक फलोगरी समूहको उद्देश्य अनुरुप आफ्नो जन्मदिनमा एउटा बिरुवा अवश्य रोप्न आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो“ बिरुवा रोप्दै गरेको तस्वीर ग्रुपमा पोष्ट गरेर निःशुल्क प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न समेत म आग्रह गर्दछु । ” ‘बिरुवा रोप्नुहोस, जीवन बचाउनु होस ’ भन्ने नारालाई उहाँले सार्थक बनाउनुलाई लाइक गर्न गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।